မီးပွိုင့်က မီးဝါလေးများ၏ ကြာချိန် | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » Copy/Paste » မီးပွိုင့်က မီးဝါလေးများ၏ ကြာချိန်
မီးပွိုင့်က မီးဝါလေးများ၏ ကြာချိန်
- lu nyo chaw
Posted by lu nyo chaw on Feb 10, 2012 in Copy/Paste |9comments
ကျွန်တော်တို့ မန္တလေးမှာ လမ်းတွေကအရင်ထက်ကောင်းလာတော့ ဆိုင်ကယ်တွေ ကားတွေက အရင်ထက်နည်းနည်း ပိုမြန်အောင်မောင်းလာလို့ရလာတယ်။ကျွန်တော်အပါအဝင်ပေါ့။
ပြဿနာက မီးပွိုင့်တွေမှာတွေ့တာ။62လမ်းနဲ့ လမ်3း0,35 ,26 ပြီးတော့ 26×73၊26×78 ၊35×84 အစရှိတဲ့ မီးပွိုင့်တွေမှာ အချို့က မီးဝါမလင်းတော့ဘူး။ အများစုက တော့ မီးစိမ်းပြီးပြီ ဆိုရင် မီးနီကိုတမ်းရောက်သလောက်ကို မြန်နေတယ်။
ကျွန်တော်တို့ ကခပ်လှမ်းလှမ်းက နေလှမ်းမြင်နေရတဲ့အချိန်မှာ မီးစိမ်းမို့ ဖြတ်ကူးဖို့ပြင်တဲ့ အချိန်မှာ ဒုတိယ မျဉ်းဝါကိုလဲ ကျော်ရော နီပါလေရော။မျဉ်းဖြူနဲ့ ဒုတိယမျဉ်းဝါ ကြားလေးမှာ ပဲ မီးဝါအတွက် အချိန်ပေးထားသလိုပဲဗျာ။ တစ်ခါတစ်လေ ဆိုရင်မီးပွိုင့်က အလုပ် လုပ်သလား မလုပ်ဘူးလားမသိတော့ ဒုက္ခရောက်တယ်။ မီးစိမ်းမလင်းနေလို့ ကျွန်တော် အလုပ်မလုပ်ဘူး ထင်ပြီး ဖြတ်ကူးတာ (လမ်းနဲနဲ ရှင်းလို့) အဲဒါ ဟိုဘက်ထိပ်ရောက်တော့ အရိပ်မထွက်ကိုယ်တော်ကြီး ထွက်တားပါလေရော။မီးနီဖြတ်လို့တဲ့ အဲ့တာ 35×84 မှာ။ ကျွန်တော်က မီးပွိုင့်အလုပ် မလုပ်ဘူးထင်လို့ပါလို့ ပြောတော့ သေချာကြည့်တဲ့ ဟုတ်တယ်ဗျာ
မီးနီလင်းနေတယ်။ ကျွန်တော်ဖြတ်ချိန်က မလင်းလို့ပါလို့ ပြောလဲမရ။အဲဒါညှိခဲ့ ရတယ်။
ဖြစ်နိုင်ရင် မီးဝါကြာချိန်ကို ပြင်ပေးကြစေချင်တယ်ဗျာ။ကျွန်တော် ဖြစ်ခဲ့တာ ကြာပါပြီ။ မနေ့ကမှ 62×30 မှာ ကားတစ်စိး လမ်းလယ်မှာ မီးပွိုင့်ဖြတ်ကူးရင်း ကန့်လန့်ကြီး ဖြစ်နေတာတွေ့လို့ပါ။
အဲတာ ရွာထဲကိုများ သက်ဆိုင်သူတစ်ယောက်လောက် ရောက်ခဲ့သည် ရှိသော်ပေါ့…။
About lu nyo chaw
လူညို ချော has written4post in this Website..
ထူးထူးခြားခြားပြောစရာမရှိတဲ့ မထူးမခြား သာမန်လူတစ်ယောက်ပါ
View all posts by lu nyo chaw →
အဲဒီဒွတ်ခက မန်းလေးမှမဟုတ်ဘူးဗျ..ရန်ကုန်လည်း သူမသာ ကိုယ်အသုဘဘဲ…
အကောင်းဆုံးကတော့ဗျာ..ရန်ကုန်ကတစ်ချို့မီးပွိုင့်တွေလို ကြာချိန်ကိုဂဏန်းနဲ့ ဖေါ်ပြပေးတာကောင်းတယ်..
ဟားဟား ဖြစ်ရတာလေးဗျာ အရိပ်မထွက်ကိုယ်တော်ဆိုပါလား။
တက္ကသိုလ်ရိပ်သာလမ်းနဲ့ ကမ္ဘာအေးဘုရားလမ်းဒေါင့်က မီးပွိုင့် မီးအစိမ်းမလင်းတာ ၃လလောက်ကြာခဲ့ပါတယ်…
ရန်ကင်းစင်တာရှေ့နားက မီးပွိုင့် မီးအ၀ါမလင်းတာ (၂)လကျော်သွားပါပြီ….
ကျွန်တော်တို့ဘ၀များကလဲ တခြားလမ်းက မီးပွိုင့်ကိုကြည့်သွားနေရတဲ့သူတွေပေါ့ဗျာ…
နေ့တိုင်းသွားနေကျမို့ သတိထားမိပေမယ့် သတိမထားမိတဲ့လူများဆို တန်းဖြတ်မိရင်…
တန်းပြီးတော့ တဖက်ကကားတွေနဲ့ တိုက်မိမှာပဲ….
ယာဉ်စည်းကမ်း၊ လမ်းစည်းကမ်းအတွက်…မျဉ်းကြားက မကူးတဲ့သူတွေကို လိုက်ဖမ်းသလို…
မီးပွိုင့်မှာ မီးစုံမလင်းရင် အဲဒီပွိုင့်က ရဲတွေကို ဖမ်း….
“ယစက” ဆိုတဲ့ ဆိုင်ကယ်အစုတ်တွေကို ဦးထုတ်မပါဘာမပါ၊ ရှေ့မီးနောက်မီး စစ်ကနယ်မီးမစုံပဲစီးတဲ့
မီးပွိုင့်ပျက်ချိန်မှာ ရုံထဲကမထွက်ပဲ လမ်းပိတ်ပိတ်၊ ပွင့်ပွင့်သောက်ဂရုမစိုက်တဲ့ ကောင်တွေကို ဖမ်း…..
အစိုးရဌာနကို တရားစွဲလို့ရတဲ့နေ့ကျမှ….နင်တို့ကို တရားစွဲပစ်မယ်…
“မီးပွိုင့်မှာ မီးစုံမလင်းရင် အဲဒီပွိုင့်က ရဲတွေကို ဖမ်း….
“ယစက” ဆိုတဲ့ ဆိုင်ကယ်အစုတ်တွေကို ဦးထုတ်မပါဘာမပါ၊ ရှေ့မီးနောက်မီး စစ်ကနယ်မီးမစုံပဲစီးတဲ့
မီးပွိုင့်ပျက်ချိန်မှာ ရုံထဲကမထွက်ပဲ လမ်းပိတ်ပိတ်၊ ပွင့်ပွင့်သောက်ဂရုမစိုက်တဲ့ ကောင်တွေကို ဖမ်း…..
အစိုးရဌာနကို တရားစွဲလို့ရတဲ့နေ့ကျမှ….နင်တို့ကို တရားစွဲပစ်မယ်”
၇န်ကုန် ပြန်ေ၇ာက်လို့ကားမောင်းမယ်ဆိုရင် အိမ် က အရင်ဆုံးမှာတာတေ့ာ မီးဝါရင် လမ်းလည်ကောင်ရောက်တဲ့နေရာမှာ ကန်လန့် ပဲဖြစ်ဖြစ် ဇောက်ထိုးပဲ ဖြစ်ဖြစ် ရပ်တဲ့မဟုတ် ရင် နင်ပြန်လာရင်သုံး ဖို့ ပိုက်ဆံ ဘဲဥ ဖို့ ၇တာနဲ့ ပဲ ကုန်မယ်တဲ့တကမာလုံးမှာ လူတိုင်းလိုက်နာသုံးနေကြတာ က မီးစိမ်းရင် မောင်း ၀ါလာရင် သတိနဲ့ပိုင့် ဖြတ်နေရင် ပြီးအောင်ဖြတ် မဖြတ်ရသေးရင် ရပ် နီ ၇င် လေးဘီးလုံး၇ပ် …ဗမာပြည်မှာတော့ မဟုတ် မီးဝါကမလင်း မီးနီ က မှိန် မီးစိမ်း ကပျက် ဘဲဥ က timing ကို ကစားနဲ့မီးဝါ ဖြတ်တာနဲ့ ဖမ်းပါပြီဗျာ ..
ဟုတ်တယ် အတိသဉ္ဇာ နာဂရ ချစ်သူ ရေ.. အောင်မလေး မောတာဗျာ။
သူတို့က ဆက်ကြေးမရတဲ့ပွိုင့်တွေ ဆိုရင် အရိပ်ထဲကကို မထွက်တော့ဘူး။
မန်းလေးမှာ တစ်ချို့မီးပွိုင့်တွေက အစိမ်းပြီးရင် တမ်းနီတာဗျ
အရင်တစ်ခါ ၂၆ လမ်း ၇၃ မှာ သေတော့မလို့ အရှိန်နဲ့မောင်းလာတာ အနားရောက်မှ တန်းနီတာ၊တော်သေးတာပေါ့ ဆိုင်ကယ်က ဘရိတ်ကောင်းလို့
မဟုတ်လို့ကတော့ ဖရဲတော့ မတွေးရဲစရာဘဲ။
မန်းလေးက မီးပွိုင်တွေက တော်တော်ဆိုးနေပြီ upgrade လုပ်သင့်ပြီ။
အရိပ်မထွက် ကိုယ်တော်ကြီးက ခီများကို ပွိုင့်ကစားပြီး ဖမ်းလိုက်တာ ထင်ပါ့ … ။
အဲဒီကောင်တွေက သူတို့ကို ပေးထားတဲ့ တာဝန်ကို ကျေပွန်အောင် မထမ်းဆောင်ဘဲ တာဝန်ကို အခွင့်ကောင်းယူပြီး လုပ်စားနေတဲ့ ကောင်တွေပါဗျာ … ။
ဒါနဲ့ ပီကယ်ထဲမှာ ချီးကျူးရမယ့် လူတစ်ယောက်တော့ ရှိနေတယ်ဗျို့ … ။ သူကတော့ ရန်ကုန် လစ်လမ်းနားက လမ်းရှင်းပေးတဲ့ ပီကယ် ပါပဲ။ သူ့ကိုတော့ အမဲစက်တွေကြားက ရှားရှားပါးပါး အဖြူရောင် လေးလို့ ပြောရမယ် ထင်တယ်။ တော်တော် အလုပ်လုပ်တဲ့ ပီကယ် ပါပဲဗျာ … ။
ဟုတ်ပါ့ဟုတ်ပါ့။ အဲဒီမော်တော်ပီကယ်ကိုကျွန်မတို့နာမည်ပေးထားတာ ပြုံးပြုံးကြီး လို့။ ဘယ်သူ့ကိုမဆိုပြုံးပြုံးပြပြီးတာဝန်ကျေလွန်းလို့အဲနားရောက်တိုင်းသူ့ကိုပြန်ပြီးပြုံးပြုံးပြမိတယ်။